Sheekh Shariif oo la filiyo in loo doorto gudoomiyaha isbahaysiga ku shiraya Asmara. Ruunkinet 11/09/07
Warar lagu kasoon yahay ayaa ku waramaya in Sheekh Shariif oo ah gudoomiyiha maxkadaha Ismaamiga ee Soomaliya loo dooran doono in uu noqdo guddomiya Isbahaysiga oo dhawaan lagu magacaabi doono dalka Eriteriya oo uu ka socdo shirka looga soo horjeedo joogitaanka ciidamada Itoobiya ay ku joogaan Somaaliya.
Warka ayaa intaasi ku daraya in Shariif Xasan Sheekh Adan loo magacaabi doono gudoomiyaha golaha dhexe ee Isbahaysiga ayadoo la filayo in Jama Cali Jaamac ama Jaamac Maxamed Qaalib loo magacaabi doono guddomiyaha guddiga fulinta ee Ishabaysiga.
Golaha dhere oo tiradoodu noqon doonto sida lagu wado 51 xubnood ayaa awood qeybsi lagu sameyn doonaa dhawaan inta uusan shirka dhammaan.
Shirkan oo lagu wado in la soo afjaro Arbacada ama Khamiiskta nagu soo fool ah ayaa waxaa si weyn uga soo horjeeda inta badan dowladaha reer galbeedka oo ay horboodayaan maamulka dowladda Mareykanka.
Sidoo kale, ayadoo aan weli laga soo sheegin khiilaaf weyn shirka Asmara ayaa waxaa la sheegayaa in fikradaha qaarkood laysku diiday waxaana jira in ay shirkaasi ka soo qeyb galeen dad marka laga reebo diidmada ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya ay ku kala duwan yihiin dastuurka lagu dhaqaya Isbahaysiga oo ay qaarkood hiyiin calmaaniyiin qaarna ay yihiin islaamiiste inkastoo la sheegaya in kuwa raba in dastuurka aan lagu qorin JIHAAD ay ka adkaadeen kuwa rabo in kalimaddaasi lagu qoro dastuurka Isbahaysiga.